အသက်အရွယ်ရလာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ကြောင့် မည်သို့သော အခက်ခဲ များရှိလာနိုင်မည်နည်း? - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အသက်အရွယ်ရလာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ကြောင့် မည်သို့သော အခက်ခဲ များရှိလာနိုင်မည်နည်း?
စက်တင်ဘာ 11, 2018 Flt Lt Pattraporn Pootong, M.D.
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလတွင် အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိ မိခင်များ ကိုကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နေကြဖြစ်သည်။ ယနေ့လက်ရှိအချိန်ကာလ နှင့်ယှဉ်ကြည့်သောအခါ ၊ မျိုးဆက်သစ်အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိဘဝ ပိုမိုတည်မြဲစေရန်အတွက် အသက်အရွယ်ရလာမှအိမ်ထောင်ပြုကြသည့်အတွက် အသက် ၃၀ ၊ ၄၀ မှမိခင်စဖြစ်လာကြသောသူများကို ပိုမိုမြင်တွေ့လာရသည်။ အသက်အရွယ်ရလာသော မိခင်များ မှမွေးဖွားလာသော ကလေးသူငယ်များမှာ သာမန်အားဖြင့် အဆင်ပြေမှုရှိသော်လည်း ၊ ဤအသက်အရွယ်ရလာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှု ရှိနိုင်ခြေအန္တရာယ်များရှိသည်။ အသက်အရွယ်ရလာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာ မကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုရယ် မဟုတ်သော်လည်း ၊ ပိုမိုသတိထားပေးရန် လိုအပ်သော အရာများရှိသည်။
အသက်ရင့်မိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်များ
အသက်အရွယ်ရလာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွင် မိခင်အတွက်ရောကလေးအတွက်ပါ ပိုမိုများပြားသော အန္တရာယ်များ ရှိစေသည်။ မိခင်များအတွက် အန္တရာယ်မှာ ၊ အသက်ငယ်သော မိခင်များထက် အသက်အရွယ်ရလာမှ ကိုယ်ဝန်ရှိ သောအမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်ရှိ ချိန်တွင် သွေးအားများခြင်း၊ ဆီးချိုဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများသည်။ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးများထက် အသက် ၃၅ နှစ် နှင့်အထက်ရှိ အမျိုးသမီးများ မှာ သွေးအားများခြင်းနှင့် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ ဆ ပိုများသည်။
ကလေးအတွက်မှာ၊ အသက်အရွယ်ကြောင့် Down’s syndrome ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် မိခင်အသက်အရွယ်ရလာလေလေ Down’s syndrome ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလေလေ ဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်အရ၊ အသက်၂၅နှစ်အရွယ်မိခင်များ၏ကလေးတို့တွင် အယောက် ၁၂၅၀ တွင် ၁ ဦးမှာ Down’s syndrome ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အသက် ၄၀ ရှိမိခင်များ၏ကလေးတို့တွင် အယောက် ၁၀၆ ယောက်တွင် ၁ ယောက်မှာ Down’s syndrome ရှိသည်။
Down’s syndrome ရှိနိုင်သည်မရှိနိုင်သည်ကို သိနိုင်ပါသလား?
အသက် ၃၅ နှစ်နှင့် အထက်ရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး များမှာ Down’s syndrome အတွက် ဆေးစစ်သင့်သည်။ ၎င်းဆေးစစ်ခြင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ၁၀ ပတ်အကြာတွင် စစ်နိုင်ပြီး ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ၁၅ မှ ၁၈ ပတ် amniotic အရည် အားစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စစ်နိုင်သည်။ ဤဆေးစစ်ခြင်းမှ ကလေးတွင် Down’s syndrome သို့မဟုတ် ကလေး၏ ခရိုမိုဆုန်းတွင် ချို့ယွင်းမှုရှိမရှိကိုသိရှိန်ိုင်သည်။ ကလေးတွင်Down’s syndrome ရှိသည်ဟုသိရပါက မိခင်တွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလာသော ဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးသော Down’s syndrome အပြင်၊ မျိုးရိုးလိုက်တတ်သော Thalassemia သွေးရောဂါကဲ့သို့ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှုများလည်းရှိသည်။ ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်မှုအရ၊ ထိုင်းနိုင်ငံသား ၃ ယောက်တွင် ၁ ယောက်မှာ ပုန်းအောင်းနေသော Thalassemia ရှိသည်။ ပုန်းအောင်း Thalassemia ရှိသောသူနှစ်ယောက်မွေးသောကလေးမှာ Thalassemia ဖြစ်နိုင်ခြင်း ၂၅% ၊ ရောဂါသယ်ဆောင်သူဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀% ၊နှင့်၊ Thalassemia ရောဂါကင်းသူ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀% ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လက်မထပ်မီ အနာဂတ်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ဤအခက်အခဲအားကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် ဆေးစစ်ပြင်ဆင်မှုများလိုအပ်သည်။
လက်မထပ်မီဆေးစစ်ခြင်းမှာ အဘယ်သို့ အရေးပါ ပါသလဲ?
မင်္ဂလာဆောင်တော့မည့် စုံတွဲများမှာ သူတို့၏ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၊ လက်ဆောင်များ၊ နေရာ၊ အဝတ်အစားနှင့် အသွင်အပြင်များအတွက် အာရုံစိုက်နေကြလေ့ရှိပြီး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကိုမေ့လျော့နေတတ်ကြသည်။ သူတို့မှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည်အရေးမပါသောအရဟုတောင်ထင်မှတ်တတ်ကြသည်။ အမှန်ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် အောင်းနေတတ်သောရောဂါများရှိသောကြောင့် လက်မထပ်မီဆေးစစ်ခြင်းမှာလိုအပ်သည်။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရခြင်းမှာ၊ မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာခြင်း၊ မိမိ၏လက်တွဲဖော်မှကူးစက်နိုင်သည့်ရောဂါများမှကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း နှင့် မွေးလာမည့်ကလေးအားကူးစက်ခြင်းမှကြိုတင်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆေးစစ်ခြင်းသည် အရေးကြီးသည်မှာ မိခင်ဖခင် တချို့မှာမိမိ သည်ရောဂါပိုးများသယ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကို ဂရုမပြုမိတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လက်မထပ်မီ ဆေးစစ်ခြင်းမှာ သင်ထင်သလောက်မရှုပ်ထွေးပါ။ ထုံးစံအတိုင်းအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါ သွေးစစ်ခြင်းနှင့် ဆရာဝန် မှ အထွေထွေစစ်ဆေးခြင်းတို့သာဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်မှာ လိုအပ်လျှင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ စစ်ဆေးခြင်း၊ သားအိမ်နှင့်သားအိမ်ပြွန် အတွက် အာထရာစောင်းစစ်ဆေးခြင်း ရှိနိုင်သည်။“အသက်ရင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာ အန္တရာယ်များရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဘဝ၏မည်သည့်အချိန်မှာမဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရာတွင်၊ မိခင်၏အသက်ကျန်းမာရေးအား သေချာစေခြင်းဖြင့် စံနှုန်းပြည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။”
အသက်အရွယ်ရလာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ကြောင့် မည်သို့သော အခက်ခဲ များရှိလာနိုင်မည်နည်း? အသက်အရွယ်ရင့်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွင် မိခင်အတွက်ရောကလေးအတွက်ပါ ပိုမိုများပြားသော အန္တရာယ်များ ရှိစေသည်။ မိခင်များအတွက် အန္တရာယ်မှာ
M.D., Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, 1988. , 2009